UKZN Online Volume: 6 Issue: 28
BIOKINETICIST UNDERTAKES UNIQUE AIDS RESEARCH, THE FIRST IN SOUTH AFRICA
BEST FINAL YEAR STUDENT IN CIVIL ENGINEERING
UKZN PROFESSOR EDITOR OF NEW BOOK ON SOUTHERN AFRICAN-IRISH HISTORY
NEW DEAN AND HEAD FOR SCHOOL OF EDUCATION
TWO DISTINGUISHED TEACHER AWARDS MADE
BUSINESS SCIENCE STUDENT CHOSEN FOR SA U-19 CRICKET TEAM
BENCHMARKING APPLIED SPORTS SCIENCE INTERNATIONALLY
MASTERS ALUMNUS TO USE SKILLS TO PROMOTE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DURBAN
UKZN MEDICAL PROFESSIONALS RECEIVE CMSA QUALIFICATIONS
CHALLENGES AND INTERVENTIONS FOR HIV SERO-DISCORDANT COUPLES OUTLINED
WELSH HONOUR FOR ACADEMIC
UMPHATHI OMUSHA KWEZIBHEKELENE NEZABAFUNDI EKOLISHINI LAKWAHUMANITIES
PROBLEM-BASED LEARNING LAID BARE
UKZN ACADEMIC DELIVERS PUBLIC LECTURE IN BLOEMFONTEIN
SOUTH AFRICA’S INDUSTRIAL RELATIONS PATH EXAMINED
Ms Angeline Stephens.
UNksz Angeline Stephens oqokwe njengomphathi wakwaStudent Support Services eKolishini lakwaHumanities uthe uzoqikelela ukuphathwa okukahle kwalomnyango.
UStephens uwujabulele lomsebenzi emva kokusebenza iminyaka eyisikhombisa emnyangweni wezeMfundo eKZN, aphinde asebenze eceleni enza umsebenzi ophathelene ne-Individual and group psycho-therapeutic and psycho-social interventions, assessments and research.
‘Ngikulangazelele ukwazi engizosebenza nabo e-UKZN nabafundi. Ngiyazi ukuthi kunezinqinamba eziningi kodwa ngikubona lokhu njengethuba lokuthi ngiqhamuke nezindlela ezintsha. Ukusebenza kwami sekungifundise ukuthi kuhlale kunezikhathi ezibuyiselayo,’ kusho uStephens.
Njengomuntu owafunda e-UKZN, uStephens unethemba ukuthi njengoba ekewaba uthisha futhi aphinde abe iPsychologist, kuzosizakala abafundi neNyuvesi ekufundeni nasekuthuthukeni.
‘Nginenhlanhla ukuthi sengisebenze ekufundiseni emazingeni ahlukene nakuma NGO nasezinkampanini ezizimele. Lomsebenzi unginikeza izikhali zokwazi kangcono ukuxhumana kwezinto eziningi ezahlukene nokubaluleka kokuba nobudlelwano ukuze kufikwe esiphethelweni esisodwa e-UKZN.
‘Abafundi nabasebenzi kumele balindele uMphathi okwaziyo ukuthi bakhulume naye, onolwazi nozobasekela. Ngizolalelisisa izidingo zabasebenzi nezabafundi ngisebenze nabo ukuze kufezeke lezozidingo ngokushesha.’